Global Voices teny Malagasy » Nanao Ahoana i Myanmar Tamin’ny Androm-pifidianana Manan-tantara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Novambra 2015 17:13 GMT 1	 · Mpanoratra Thant Sin Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Na dia eo aza ireo tsy fanarahan-dalàna sasany voalaza, nahavita nanatontosa fifidianana milamina tamin'ny ankapobeny i Myanmar tamin'ny 8 Novambra. Antoko ara-politika sy ara-poko miisa 91 no nandray anjara  tamin'ny fifidianana. Tarihin'ny filoha Thein Sein ny antokon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao, ny Antoko Ho an'ny Firaisankina sy ny Fampandrosoana (USDP); raha tarihin'ilay mendrika tamin'ny Nobel-ny Fandriampahalemana, Aung San Suu Kyi kosa ny antokon'ny mpanohitra, Ligy Nasionaly ho amin'ny Demokrasia (NLD).
Teo ambanin'ny fitondrana didy jadona miaramila nandritra ny 50 taona i Myanmar. Tamin'ny fifidianana 1990, nahazo fandresena miezinezina ny antokon'i Aung San Suu Kyi saingy tsy noraharahian'ny miaramila ny voka-pifidianana ary nifehy ny governemanta izy ireo. Tamin'ny taona 2010, nampiditra fanovana ara-politika tahaka ny fanatontosana fifidianana ny governemanta na dia voampanga fa nanodikodina  ny voka-pifidianana aza.
Anisan'ireo olana nitranga tamin'ny fampielezan-kevitra mialoha ny fifidianana ny fahitana  fahadisoana goavana tamin'ny lisitry ny mpifidy, ny famerezan-jo ho an'ny vondrona ara-poko tahaka ny Rohingya izay silamo ny ankamaroany, ary koa ny fiangarana hita na fahadisoana teo amin'ny komitim-pifidianana . Na dia eo aza ireo olana ireo, maro ny olom-pirenena mbola nino ny fampanantenana tamin'ny fifidianana 8 Novambra hampiroborobo ny fiovana eo amin'ny fiarahamonina.
The very first 10 people went into the voting station. Now I am the first in line. #MyanmarElection  #Myanmarvotes  pic.twitter.com/HlR1FZSdGG 
Maro ny olona namoaka ny sarin'ny rantsa-tanan'izy ireo misy ranomainty mba hanehoana fa avy nifidy izy ireo. Bilaogera Ei Myat Noe nizara ny heviny  momba ny dikan'iny androm-pifidianana iny :
Nanazava  ny dikan'izany marika izany i Kenneth Wong:
Nanamarika  ilay mpikatroka Khin Ohmar fa maro ny olona nitaraina fa tsy nahita ny anarany tao amin'ny lisi-pifidianana, raha nijoro vavolombelona kosa ny sasany fa nahazo kara-pifidianana marobe. Namaky vaovao ihany koa izy fa mitarika ao amin'ny fari-pifidianan'ny tafika ny antokon'ny fitondrana.
Rehefa nikatona tamin'ny 4 ora hariva ny biraom-pifidianana, miandry am-panaintainana ny vokatra vonjimaika ny olona. Nidera  ireo miasa mafy ao amin'ny biraom-pifidianana ilay mpanao gazety Lupa Aung:
Mandritra izany fotoana izany, ao Loikaw renivohitry ny fanjakana Kayah, nahatezitra kandidà sy mpifidy ny fahatongavan'ny vato 5000 efa voaisa mialoha. Nitatitra  i Josephine Mu Nan :
Nitranga tao amin'ny faritra maromaro manerana ny firenena ny fahatongavan'ireo vato ‘tonga aloha’. Nampiahiahy ny vahoaka sy ny mpanara-maso ny fifidianana izany vaovao izany. Nilaza  ny Burma Partnership, tambajotram-pikambanana miaro ny demokrasia sy ny zon'olombelona fa mirona any amin'ny antokon'ny fitondrana ireo vato mampiahiahy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/12/76473/
 milamina : http://www.irrawaddy.org/election/news/amid-some-complaints-burmas-vote-passes-peacefully
 nandray anjara: http://uecmyanmar.org/index.php/voters
 novolavolain'ny : http://burmacampaign.org.uk/media/Constitution-1.pdf
 olana : https://globalvoices.org/2015/09/22/as-election-draws-near-myanmar-turns-to-social-media-at-democratic-turning-point/#
 ny fahitana: https://globalvoices.org/2015/07/29/funny-cartoons-illustrate-peoples-concerns-as-election-draws-near-in-myanmar/
 famerezan-jo : https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/11/myanmar-elections-marred-by-growing-repression-and-rohingya-disenfranchisement/